Ukushisa komhlaba kuvula umnyango esihogweni eSiberia | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kuvula "umnyango oya esihogweni" eSiberia
Isithombe - Alexander Gabyshev
Njengokungathi yibhayisikobho ebhubhisayo, ucingo luye lwavulwa eSiberia »umnyango esihogweni '', umgodi ongaphezu kwamamitha ayikhulu ukujula nekhilomitha elilodwa ubude. Itholakala eduze kwedolobha laseBatagai, lapho kungekho muntu ofuna ukusondela khona.
Kancane kancane kusakazeka kakhulu. Futhi sibonga ukufudumala kwembulunga yonke.
Yize ukufudumala kwembulunga yonke kuthinta yonke iplanethi, ezindaweni ezibandayo kuzenza zizwakale kakhulu, futhi lapha, kulesi sifunda esingeseRussia, Ukukhuphuka kwamazinga okushisa kubangela i-permafrost, okuwukungqimba kwenhlabathi (noma okufanele kube njalo) iqandisiwe, ukuncibilika. Ngakho-ke, inhlabathi iyawa, iveze izinsalela zesikhathi esedlule esikude.
Empeleni, yize lokhu kuyisibonelo esisodwa sokuthi isimo sezulu esizungeze iplanethi sishintsha kakhulu futhi ngokushesha, kuyiqiniso futhi ukuthi singasisiza siqonde okwenzeka eminyakeni eyizinkulungwane eyedlule, lapho ama-mammoths ayesekhona. Kangangokuthi iqembu lososayensi be-paleontologists lisizakala ngokuthi le ndawo ivele ukuzohlola, futhi kuze kube manje sebethole izinsalela, hhayi i-mammoth kuphela, kepha ngisho namahhashi nenyoni. Kuhlala ukuthandana kusuka kungabi ngaphezulu noma ngaphansi iminyaka 4.400.
Ingabe kukhona izimbobo eziningi? Ngokwesitatimende sikachwepheshe ephephandabeni Izikhathi zaseSiberiayebo. Ingqikithi, kunezimbili futhi ezisenyakatho neRussia. Mancane, futhi aqhelelene ngamakhulu amakhilomitha ambalwa. Kodwa okuningi kungavela ezindaweni eziseduze ne-Arctic Circle.
Futhi kuwe, ubucabangani ngalokhu okutholakele? Kuyamangaza, akunjalo? Ukufudumala kwembulunga yonke kuyinkinga enkulu kakhulu okumele siyixazulule, sithathe izinyathelo ezidingekayo ukugwema imiphumela yayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukufudumala kwembulunga yonke kuvula "umnyango oya esihogweni" eSiberia
ine zamora f. kusho
Ukukhanya kwelanga emini bekusondele kakhulu kulezo zindawo kulenyanga kaJuni… .Lendlela ibinkulu kakhulu ngo-2002 kuya ku-2006… —CR
Phendula kuma-inés zamora f.
Yini i-ice pack?